25 / 07 / 2021 25 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 480 Views စာ0မှတ်ချက် 43109 သတ္တုနဂါး BeatBox, 43115 အဆိုပါ Boombox, အချစ်ရယ်, Beatbox, အချစ်ရယ်, အုတ်, ဖျက်သိမ်း, ပယ်ဖျက်သော themes များ, Lego, Lego Vidiyo, နယူးအပိုင်းအစ, ဗီဒီယို
Lego VIDIYO ၂၀၂၂ အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုစတင်တော့မည်ဖြစ်သော်လည်းဤအခင်းအကျင်းကိုအသစ်တီထွင်။ ပြန်လည်ပြုပြင်နေစဉ်တွင်အခင်းအကျင်းမိတ်ဆက်ခဲ့သောအပိုင်းအစများစွာကိုမှတ်မိရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူကြပါစို့။
ဂီတအပြင် app ၏ပေါင်းစပ်ထားသောအင်္ဂါရပ်များအပြင် Lego VIDIYO၊ p မှာတစ်ခုရှိတယ်artအခင်းအကျင်း၏ကျန်မှထွက်မတ်တပ်ရပ်စေသည် icular Lego Group ၏ catalog က၎င်းသည်ဒြပ်စင်အသစ်များ၏အစစ်အမှန်ပြခန်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ BeatBoxes မှသည် Bandmates အထိလတ်ဆတ်သောမှိုအရေအတွက်သည်အခြားအကြောင်းအရာများထက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီးကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဤအသစ်သောဒြပ်စင်အမြောက်အများသည်ပထမဆုံးသောလှိုင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောတည်ဆောက်နိုင်သောမော်ဒယ်များဖြစ်သောဆောင်ပုဒ် BeatBoxes မှလာသည်။ VIDIYO ပူဇော်နိုင်ပါတယ် ၎င်းတို့တွင်အရာဝတ္ထုအသစ် (၇) ခုပါဝင်ပြီးအရူးဇာတ်ကောင်များကိုဖန်တီးရန်အသေးစားအသေးစားဆက်စပ်ပစ္စည်းအသစ်များပါဝင်သည်။ ဒီထဲမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းဤကျယ်ပြန့်အရွယ်အစားကွဲပြားနှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအဆောက်အ ဦး အတွေ့အကြုံရှိကြ၏။
minifigures ၏စကားပြောပေမယ့် VIDIYO BeatBoxes မှအာရုံကို၎င်း၏ဒုတိယလှိုင်းအတွက်ပိုမိုရင်းနှီးသောအစုံသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည် minifigures သည်အနည်းဆုံး element အသစ်တစ်ခုစီကိုဆက်လက်တသမတ်တည်းဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။art အနည်းငယ်ရှားပါးဖြစ်ပွားမှုကနေ) ။ ဤအ p ပေမယ့်arts ကိုဆောင်ပုဒ်တစ်လျှောက်လုံးပြန်သုံးလိမ့်မည်, အဘယ်သူမျှမကတဆင့်ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့သည် VIDIYO ဒါပေမယ့် BeatBox element တွေကိုပရိတ်သတ်တွေကအသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်.
ယခုအချိန်အထိအဓိကအကြောင်းအရာ၏ဘဝတွင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ VIDIYO အုတ်ဂီတ p ၏အပြင်ဘက်ကမ္ဘာသို့၎င်း၏လမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီartထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် nership Ninjago, CITY or VIDIYO။ ပန်ကာတစ်ခုကဖန်တီးခဲ့တယ် ခံယူချက် Element တစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုဖို့ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်သလဲ Batman သူတို့မှာရှိသည့်အလားအလာကိုပြသခဲ့သည်။ တကယ်တော့, 43115 အဆိုပါ Boombox အိမ်ရှင်က သီးသန့်ပွဲ ဦး ထွက် 1 ×5ပန်းကန်ပြား၏, သို့သော်ဤဖွယ်ရှိလာမည့်နှစ်များတွင်အခြားအစုံမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အသစ်တင်လိုက်တဲ့အရေအတွက်ဘယ်လောက်များများစောင့်ကြည့်ရမယ် Lego VIDIYO အဆိုပါအုတ်သည်အခြား themes များကူးပြောင်း Lego Group က လေယာဉ်မှူးသစ် ideas 2022 ခုနှစ်တွင် 2023. အားဖြင့်ဖြန့်ချိဘို့သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောလာမည့်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်အဖြစ်ပိုပြီးတိကျတဲ့ဒြပ်စင်သည် 43108 Bandmate စီးရီး2အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှစတင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အကွာအဝေးသည်၎င်းတို့ကိုရရှိရန်တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်သည်။ BeatBox minifigure ခေါင်းကိုမည်မျှအသုံးပြုမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မစဉ်းစားနိုင်ပါ။ Lego BeatBoxes များမရှိတော့လျှင်အုပ်စုဖွဲ့ပါ။
← LEGO သည်ပရိသတ်ငယ်ရွယ်သူများ၏ကုသိုလ်ဖြစ်လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ကူညီသည်
LEGO ဒီဇိုင်နာသည် BIONICLE Easter ဥကိုအလုပ်လုပ်သည် →